Maxaa ka jira in maxaabiista Kenya sanadkii la siiyo wax ka yar hal doollar? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in maxaabiista Kenya sanadkii la siiyo wax ka yar...
Maxaa ka jira in maxaabiista Kenya sanadkii la siiyo wax ka yar hal doollar?
Maxaabiista Kenya ku xiran /Photo Credit: Getty images
Nairobi (Halqaran.com) – Maxkamad ku taallo dalka Kenya ayaa ku gacan seyrtay dacwad loo gudbiyey oo ku saabsaneyd in mushaarka maxabiista la siiyo la kordhiyo.
Xubnaha dacwaddaasi wadayna waxay sheegeen iney go’aanka maxkamadda racfaan ka qaadanayaan isla-markaana ay dacwaddooda halkeedi ka sii wadanayaan.
hal doolar wax ka yar
sanadkii la siiyo